Maraykanka oo ugu baaqay dowlada federalka inay la heshiiso Dowlad Goboleedyada | allsanaag
Maraykanka oo ugu baaqay dowlada federalka inay la heshiiso Dowlad Goboleedyada
28th May 2022 admin Category :
Safaarada Maraykanka ee dalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowlada federalka inay wadaxaajood la sameyso madaxda dowlad goboleedyada dalka si loo suurtogaliyo jawi ay ku dhici karto doorashada dalka.
Qoraal la soo dhigey bogga uu ku leeyahay Twitterka safaarada Maraykanka ayaa lagu sheegay inay lagama maarmaan tahay in dowlada federalka iyo maamul goboleedyada ay xaliyaan khilaafka ka dhex jira.
Baaqan ayaa qeyb ka ah cadaadis xoog leh oo ay beesha caalamku ku saarayaan dowlada federalka inay dadejiso qabashada doorashada dalka oo la qorsheynayay inay dhacdo dhamaadka sanadkan.
Dowlada Maraykanka ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee sida dhow ula socda siyaasada dalka Soomaaliya,waxana baaqan u muuqdaa mid dowlada federalka oo ka cagajiideysa inay heshiis la gaarto maamul goboleedyada dalka oo qaarkood aysan xiriir wanaagsan la lahayn.
Baaqa dowlada Maraykanka ay soo saartay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maanta uu soo saaray guddoomiyaha Aqalka Sare warsaxaafadeed uu ugaga hadlayo wadada loo marayo qabashada doorasho heshiis lagu yahay waxaana lagu sheegay war saxaafadeedka in qabashada doorashooyinka ay u baahan tahay wadatashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan Madaxda Qaranka, dowlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadda ka hor 25 bishan June.
Hogaamiyaasha xisbiyada dalka ayaa wax ay dhowr jeer ku baaqeen in dowlada federalka ay dardargeliso howlaha qabashada doorashada dalka. Waxana ay ku eedeeyeen in dowladu ay ka cagajiideyso in ay dhacdo doorasho ayna dooneyso inay waqtiga kororsato.
← Xisbiyada Muqdisho iyo Gudoonka baarlamaanka AQALKA SARE →